Kana iwe wakambomisa email email account, ipapo iwe wakakumbirwa kune yako email mupi weiyo POP kana IMAP server sevhisi. Aya ndiwo madhairekesheni anodiwa ayo chirongwa cheemail chisati chadzosera email kubva kuaccount yako.
Sezvakangoita kuti kero yako nepassword zvakasarudzika kune yako email account, IMAP nePOP server server zvakasarudzika kune wese email mupi. IMAP's server server yeSeAP, semuenzaniso, dzakasiyana neyeYahoo, uye zvese zvirongwa zvekambani IMAP zvakasiyana pane yavo yePOP server server.
Saka, iwe une sarudzo mbiri, asi ndeipi yaunoda? Ndeupi musiyano pakati peIMAP nePOP? IMAP iri nani kupfuura POP? Unogona here kushandisa IMAP uye POP, kana iwe unofanirwa kusarudza?
Pazasi pane zvese zvaunoda kuti uzive nezve IMAP uye POP, kusanganisira zvakanakira uye zvinokanganisika zvese zviri zviviri uye zvinongedzo pane yekumisa yako email uchishandisa IMAP kana POP.
Musiyano Pakati peIMP Ne POP
IMAP inomirira Internet Meseji Yekuwana Protocol. POP inomirira Post Office Protocol. Izvo zviviri zvinoshandiswa nechirongwa cheemail kurodha meseji kubva kune email server.
Saka zvisinei nebasa reemail raunoshandisa, kana iwe uchida kuwana tsamba yako kure nesaiti yavo yewebhumail, iwe unofanirwa kushandisa iyo chaiyo sevhisi IMAP kana POP server server.
Nekudaro, pane musiyano mukuru pakati peIMAP nePOP. Paunenge uchitaura kuburikidza neIMAP, chirongwa cheemail chinogona kubata mameseji zvakananga kubva kuseva, zvinosanganisira kumaka maemail sekuverenga, kuadzima kubva kuseva, kufambisa maimeri pakati pezvikwangwani, nezvimwe.
Chero chipi zvacho chaunoita muchirongwa cheemail chichaitwawo pane sevha yeemail, saka chero imwe email yevatengi iyo yakabatana kune iyo account pamusoro peIMAP inozosangana nekuchinja kwakadaro.
POP inogumira pakurodha maemail chete. Paunenge uchishandisa POP email seva, yako email yechirongwa haigoni kutumira mirairo kudzosera kuseva senge IMAP inogona. Kamwe meseji dzave kuridzwa, chero zvaunoita kwavari hazviratidzwe pane seva.
Kana iwe ukaadzimudza kana kuafambisa mune mamwe mafolda, iwe uchaona shanduko mukati kuti email chirongwa chete, kwete kuburikidza newebhumail interface kana pane chero imwe email echirongwa chaunoshandisa neiyo email account.
Ndinofanira Kushandisa IMAP Kana POP?
Iyi sarudzo iri kwauri zvizere, asi inoita pfungwa yekushandisa IMAP.
Iwe unofanirwa kusarudza IMAP pamusoro pePOP kana iwe uchida kushanduka kwakanyanya. Iwe unozogona kuwana yako email pane akawanda madivha sezvaunoda, uye kuita ese ese aenzaniswe. Paunodzima email kubva pafoni yako, iyo email imwechete ichabviswa paunotarisa mameseji ako pakombuta kana piritsi rako. Kutumira email pane imwe mudziyo kunoratidza mubhokisi rakatumirwa pane chimwe chipenga. Izvi zvinoita kuti vanzwisise vanhu vazhinji.
Nekudaro, kana yako email ikapa inokupa yakaderera nzvimbo yekuchengetedza emaema, POP inogona kunge ichidikanwa Funga nezvemuenzaniso iwe uine yakasimba 200 MB yeemaimere nzvimbo. Kana iwe ukashandisa IMAP, uye iwe uchida kuchengeta ako ese maemail nekusingaperi, iwe unokurumidza kumhanya wakadzika pakadzika nzvimbo.
Nekudaro, iwe pachako unogona kushandisa POP kudhanilodha maimeri kukombuta yako uko kwaunonyanya kuachengetedza. Chero bedzi iwe uchimisa yako email account yekubvisa maimeri kubva server mushure mekunge yaiswa, iwe hauzombopererwa neangava pane server asi zvakare haizomborasikirwa nemharidzo (chero bedzi iwe uine ivo vanotsigira mudziyo wako).
Kana iwe uchida zvishoma zvishoma setup sezvinobvira, IMAP inofanirwa kuve yako sarudzo. Vazhinji vanopa email vanodzima POP nekukasira asi siya IMAP yekuvhurwa yakavhurika. Kana iwe ukafunga kushandisa POP, ungangoda kupinda mune yako e-mail kuronga kubva pawebhu browser kutanga kuitira kuti iwe ugone kugonesa POP.
Sezvauri kuona, kusarudza chaiko kuri kwauri nemamiriro ako. Unogona kusarudza IMAP nezvimiro zvayo asi zvingangomhanya yakaderera pane yekuchengetedza nzvimbo kana iwe uchichengeta maemail mazhinji, kana kuti unogona kusarudza POP kuti isambo kumhanya yakaderera pane yekuchengetedza asi uchikundikana pane zvinobatsira zvinowiriranisa maficha.
Mashandisiro Ekushandisa IMAP Kana POP
Vazhinji vatengi vemazuva ano eemail vanokutendera iwe kupinda yako email kuburikidza newebhu login interface apo zvese zvaunoda kuziva ndiyo yako email kero uye password. Asi kana iwe uri kupinda IMAP kana POP magadziriro, iwe unofanirwa kuziva mamwe mamwe maumbirwo.
Aya ndiwo eEMAP nePOP server server kune vamwewo vanojaira email.
Outlook - POP & IMAP
Yandex - POP & IMAP
SMTP: Yakakosha asi Yakasiyana
POP uye IMAP hazvisi izvo zvega email server zvaunofanira kuziva paunenge uchimisa email pane mudziyo. Nepo mbiri dzekare ndezvekutora tsamba, SMTP marongero ndeyokutumira tsamba.
Kana iwe usina iyo chaiyo yeSMTP server server yakagadzirirwa pane yako kifaa, mutengi haazive kutumira tsamba kubva kuaccount yako. Iwe unogona kunge usina dambudziko rekutora tsamba, asi haungakwanise kutumira mameseji matsva.
Mazhinji masevhisi eemail anoshandisa SMTP server sey smtp.server.com. Seva yeGmail yeSMTP, semuenzaniso, iri nyore smtp.gmail.com. Nekudaro, vamwe vakasiyana zvishoma, seyaOutlook.com's: smtp.office365.com.
7 Best Free Email Accounts Unofanira Kufunga
Email Analytics: Iwo masere Email Kushambadzira Metric & KPIs Iwe Unofanirwa Kutevera